14 Ulwandle - I-Airbnb
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguBrad
Hamba uye e-Eastport Beach. Indlu entle yokulala ye-3 enazo zonke izinto eziluncedo zokuhlalisa iqela elikhulu.Ifakwe kwiindonga ze-Eastport Beach kunye nombono omangalisayo we-bay.
Indlu ebekwe kakuhle elunxwemeni enabo bonke ubutofotofo bale mihla...ngaphakathi nangaphandle. 3 amagumbi okulala atofotofo kunye negumbi lokuhlambela elinye.Ikhitshi enkulu kunye negumbi lokuhlala. Yiza nokutya kwakho kunye neziselo
Indawo enkulu yangaphandle ukonwabela i-BBQ yosapho, umgodi womlilo, okanye ukuphumla elangeni kwidesika yangaphandle.
Abanini bazamile ukubandakanya zonke izinto eziyimfuneko ukuvumela iqela ukuba lize lizonwabele.Yonke into efunekayo ukugxila kubuhle bendalo bendawo. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela, indawo yokonwabisa ephangaleleyo kunye nezinto ezithile zokuzonwabisa zemisebenzi yosapho.
Ulwandle!! I-Eastport iyaziwa ngezinye iilwandle ezilungileyo kakhulu kwi-NL. I-Eastport Beach ngokwenene kukuhamba ngomzuzu omnye.ISandy Cove Beach kunye neTerra Nova National Park yindlela emfutshane. Le yeyona ndawo ifanelekileyo ye-adventure yangaphandle. Singasathethi ke kukho ukutya okulungileyo eChucky's kwi-Happy Adventure.
Abanini bahlala ngaphantsi kweyure enye eGander kwaye bazimisele ukubonelela ngoncedo olufunekayo ukuze ukonwabele amava akho.